Suugaanta Webka Bulshada: Madal Maareynta Warbaahinta Bulshada ah oo loo dhisay Qorayaasha WordPress | Martech Zone
Haddii shirkaddaadu daabacdo oo aysan u isticmaalin warbaahinta bulshada si wax ku ool ah si ay u dhiirrigeliso waxyaabaha, waxaad dhab ahaan u maqantahay waxoogaa taraafiko ah. Iyo… natiijooyinka wanaagsan, boosteejo kastaa waxay runti isticmaali kartaa xoogaa habeyn ah oo kusalaysan barta aad isticmaaleysid.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira xulashooyin kooban oo loogu talagalay daabacaadda otomatiga ah ee kaaga WordPress goobta:
Inta badan barnaamijyada daabacaadda ee warbaahinta bulshada waxay leeyihiin muuqaal aad kaga daabacan karto RSS feed.
Ikhtiyaar ahaan, waad isticmaali kartaa a madal feed oo si otomaatig ah u daabacda markii quudintaada la cusbooneysiiyo, sidoo kale.
Shirkadda WordPress ayaa sidoo kale bixisa Jetpack kaas oo leh ikhtiyaar faafinta si aad ugu riixdo qoraaladaada marinnadaada bulsheed.
Xaalad kasta, waxaad ku darsataa koontooyinkaaga warbaahinta bulshada isla markaana markii aad cusbooneysiiso quudintaada, farriinta ayaa la soo ururiyay oo la daabacay kanaalka ku habboon. Si fiican ayey u shaqeeyaan, laakiin waxaa jira xaddidaad weyn oo dhammaantood ah.
Halka a cinwaanka boostada waxaa lagu hagaajin karaa raadinta, a boostada warbaahinta bulshada waxaa laga yaabaa inay rabto inay noqoto mid soo jiidasho leh oo u isticmaal hashtags inay waddo feejignaan dheeri ah. Natiijo ahaan, inta badan daabacayaasha doonaya inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​warbaahinta bulshada waxay qaataan oo gacanta ku dhigaan cusbooneysiintooda warbaahinta bulshada. In kasta oo ay qaadanayso daqiiqado dheeraad ah in lagu saxo oo lagu faafiyo barxad kasta, natiijooyinka ayaa si weyn uga wanaagsanaan kara kaliya inaad riixdo quudintaada.
Tina Todorovic iyo Dejan Markovic waxay dhisteen plugin WordPress ah oo ku dhexjiray Buffer. Laakiin markii ay bilaabeen helitaanka codsiyo badan oo muuqaal ah oo uusan haysan Buffer, waxay go'aansadeen inay dhisaan barxadooda - Suugaanta Webka Bulshada. Suugaanta Webka Bulshada waxay ku daraysaa wax kasta oo ah maareynta maareynta warbaahinta bulshada ee loo baahan yahay is-dhexgal aad u adag oo ku aaddan WordPress. Qaar ka mid ah astaamahan waxaa ka mid ah:
Awoodda in aan kaliya la dhexgalin dhajinta, laakiin bogagga, qaybaha, iyo tags sidoo kale!
Qoraaladaada ayaa isla markiiba lagu daabacayaa xisaabaadka bulshada isla marka lagu daabaco WordPress ka dibna loo wareego xagga dambe ee qaybtooda si mar kale dib loola wadaago!
Otomaatig fudud oo u beddelaya qaybta ama sumadda boostada hashtags ee qoraaladaada warbaahinta bulshada.
URL-yada Ololaha Falanqaynta Google ee otomaatiga oo leh UTM doorsoomayaal si otomaatig ah loo calaamadeeyay
Halkii si dhakhso leh loogu daabici lahaa warbaahinta bulshada, qoraalada ayaa saf loogu jiraa waqtiga ugu fiican ee la daabacayo.
Qoraalada Evergreen sidoo kale dib ayaa loo daabici karaa.
Kalandarka daabacaadda oo buuxa wuxuu ku siinayaa aragti cad oo ku saabsan waxa iyo goorta la cusbooneysiin doono.
Waxaa jira taageero ballaaran oo loogu talagalay dhammaan barnaamijyada waaweyn ee warbaahinta bulshada ee leh Webka Bulshada. Waad ku daabici kartaa Facebook Pages ama Groups, Instagram ama Instagram Account Account, Twitter, LinkedIn Profiles ama Pages. Iyo, haddii aad jeclaan lahayd inaad soo qaadato fiidiyowyadaada Youtube ama quudin kale oo RSS ah, waad sameyn kartaa taas sidoo kale.
Suugaanta Webka Bulshada waa aaladda jadwalka bulshada ee ugu awoodda badan abid aan adeegsaday. Hadda waxaan adeegsanayaa qalab badan si aan u dhammaystiro waxa Suugaanta Websaydhadu qabato, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helo Suugaanta Websaydhada ee booskooda qaadata! Suite-ka Websaydhada waa beddelaad ciyaarta loogu talagalay dadka wax qora iyo ganacsiyada yaryar waxayna ka dhigi doontaa jadwalka jadwalka mid aad u fudud!
Loogu talagalay maareynta warbaahinta bulshada oo buuxa sidan oo kale, qiimaha waa mid la awoodi karo. Adiga ayaa ku bilaabi kara hal xisaab isticmaale oo ku daabacda 5 xisaabaadka warbaahinta bulshada isla markaana aad ugu dhaqaaqdo dhammaan koontada ganacsi ee u oggolaaneysa 3 isticmaale iyo illaa 40 akoonnada warbaahinta bulshada.
Bilow Tijaabada 14-Maalmood ee Suugaanta Webka Bulshada
Shaacinta: Anigu waxaan ku xirnahay Suugaanta Webka Bulshada.
Tags: FacebookKooxda FacebookAstaanta FacebookInstagramastaanta ganacsiga instagramLinkedInbogag xiriir ahprofilesin xiriir ahrss ee warbaahinta bulshadakalandarka warbaahinta bulshadadhajinta baraha bulshadadaabacaadda warbaahinta bulshadamadbacada warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshadaSuite webka bulshadaTwitterWordPressplugin WordPressYouTube warbaahinta bulshada
Saameyn Wax-ku-ool ah: U Raadso Saameynaha B2B Si Fudud Ololahaaga Suuqgeynta Saameyn Ku Leh ee Soo Socda
Warshad Gudbinta: Daahfurka oo Daaro Barnaamijka Suuqgeynta ee kuu gaarka ah